Maxaan ka baran karnaa qisadii Cumayr Binu Sacdi. Qaybti 2aad
By ibrahim Aden shire August 04, 2017
Cumayr wuxuu si toos oogu tagay suubanaha SCW ka dibna wuxuu u sharaxay sheekadii dhex martay isaga iyo adeerkii. Suubanahu wuxuu u cid diray Julaas oo ka dalbaday inuu si dag-dag ah ugu yimaado. wax yar ka dib Julaas oo dhagta la hayo ayaa loo keenay suubanaha SCW.
Suubanahu maahayn mid dag-dag badan, balse wuxuu ahaa mid dagan, hubsada waxa ay dadku u sheegaan. wuxuu ku yiri Juulaasow warka Cumayr ii keenay maxaa ka jira? Julaas oo xowd-mariidyadu karayaan ayaa ku jawaabay walle iga tahay. waxaas iyo wax la mid ah nimay ka suuroobaan miyaan ahay? wiilkaan xun oo najis ah ayaa been soo dhoob-dhoobay rasuulki Allow.
Judhiiba waxaa hadalka la booday koox uur-ku-gaalayaal ahayd oo Julaas hoosta iska ogaayeen. waxay bilaabeen inay Cumayr weerar afka ah ku qaadaan. balaayo ku korsatay haduu keenay inuu aabihii been intaan la eg ka sheego iyo erayo la mid ah ayay isu dhiidhiibeen uur-ku-gaalayaashii.
Cumary nafta ayaa u timid. dhidid waaweyn ayaa ka yimid waana himbiriirsaday. gooreey ka joogto allow xageen galaa ayaa Eebe weyne oo xog-ogaal u ahaa waxa dhex maray Julaas iyo Cumayr taageero u fidiyay Cumayr. waxaa soo dagay aayada 74aad ee suurada Towba. Rabbi wuxuu yiri:
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
waxay ku dhaaranayaan inaysan dhihin iyagoo yiri hadal gaalnimo ah ayna gaaloobeen islaanimo ka dib. waxayna ku hammiyeen waxaysan gaarayn, kuma aysan nicin kaliya in Eebe iyo rasuulkiisu hodmiyeen moyee. haday soo noqdaan sidaas ayaa u fiican, hadiise ay diidaan Eebe ayaa cadaabi dooono cadaab daran aduun iyo aakhiraba, dhulkana kuma lahan sokeeye iyo gargaare toona.
Julaas waa fashilmay, warkiisina waa la cadeeyay laakiin fursad ayaa la siiyay sida aayada ku cad doorashadana isagaa loo daayay. Nasiib wanaag Julaas waa soo noqday, dhab ayuuna u islaamay muddo munaafiqnimo ah ka dib, islaamnimadiisina waa hagaagtay sida lagu xusay kutubta taariikhda. ilaa dhimashadiisi wuxuu dhihi jiray. Cumayr ayaa Eebe igu bad-baadiyay, oo ula jeedoay haddii uusan maalintaas Cumayr soo dacweeyeen inuu dhiman lahaa isagoo gaalnimo qarsanaya.
casharo badan ayaa ku jiro qisada laakiin labo ka mid ah ayaa hadda inoo muhiim ah.
1: khaawinu wadan ehel ma noqon karo. qaraabo walba oo uu kuu yahay, jeceyl walba oo aad u qabto marki aad ogaato inuu qiyaamo qaran ku jiro waad kala dhaqaaqdeen sida uu Cumayr yeelayba (FG: waa inay yihiin wax la hubo waxa aad qofka ku colaadinayso. sidoo kale waa inaysan ahayn sida aad adigu u taqaan wadaniyada iyo daacadnimada)
2: muhiimada ay leedahay in caruurta lagu beero waynaynta maadida ay rumaysan yihiin iyo in sidoo kale la baro inaysan jirin wax ka koreeyo qiyamkooda oo ay ilaashanayaan.
Haddi aynu ku dhaqano labadaan qodob waxaa hubaal ah in dalkeena iyo diinteenuba bad-badaayaan. cabsida badan ee aan ka qabno in dalka dad kale naga qaataan, dadkana diinta laga saaro waxaa asal u ah inaan ognahay in inteena badan aysan daacad u ahayn waxa ay rumaysanyihiin.
Hadaba waxaa muhiim ah in manhajka wax barashada dalka lagu daro in caruurta la baro qiyamkeena (values) iyo waxa aan u taaganahay. Diinta iyo dalku ma kala hari karaan waayo dalkeenu waa dal islaam sidaa darteed meeshuu dadku aado ayuu dalku aadi.